Honda Fit Hybrid 2011 (#525714) ကို Kyeemyindaing မြို့နယ... | CarsDB
2017-05-03 10:10:09 +0630
Honda Fit GP1 Hybrid (2011) November, Grade4(C/B), 1300 cc,2WD. Silver Metallic Color. Km (22288) Honda Fit Hybrid km နည်းပြီးတော့ auction grade မြင့်ပါတယ်။TV,DVD including Navi , Cruise Control, Back camera, TRC , Back wiper, လေထိုးစက်၊ ကော်ဘူး၊ အလယ်လက်တင်၊ Airbags, ABS, PS, PWD, AAC, ECO system, Fit Original ခြေကျော်, Original တံခါးလက်ကိုင်နီကယ်, Toned Glass , Japan Alloy, Original Lather စွပ်ပါပြီး။ Excellence condition of Engine room, ကားအတွင်းအပြင်အရမ်းသန့်ပါတယ်။ဆီစားအလွန်သက်သာလို့ မြို့တွင်းပဲသုံးသုံး Highway ပဲသွားသွားသက်တောင့်သက်တာရှိပါတယ်။ကားကောင်းလေးပါ ပဲခူးလိုင်စင် ဈေး - ၁၅၈ သိန်း Contact Phone - 09795000810,09795000811. ***CarsDBတွင်ကြော်ငြာတင်ထားသောကားဟုပြောကာဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်***
Lot Number: #525714